Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo gaaray Jabuuti (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo gaaray Jabuuti (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, iyadoona si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti kusoo dhaweeyay ra’iisul wasaaraha dalkaasi Mudane C/qaadir Kaamil Maxamed iyo xubno ka tirsan dalkaasi.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa magaalada Jabuuti kaga qeyb-gali doonno shir wadahadal ah oo maanta halkaasi uga furmaya Soomaaliya iyo Somaliland, kaasi oo uu shir guddoomin doonno madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah hakad ku jiray, waxaana la filayaa in gelinkii dambe ee maanta uu shirka ka bilowdo magalaada Jabuuti.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go’an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa cabashada Somaliland, islamarkaana la isku muujiyo talo-wadaag iyo is-ogolaansho.